Madaxweyne Dani Oo Ka Hor yimid ka qeyb galka Shirka Maanta ka Furmaya Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweyne Dani Oo Ka Hor yimid ka qeyb galka Shirka Maanta ka Furmaya Muqdisho
Maamulka Puntland ayaa gebi ahaanba qaadacday Shirka Caalamiga ah ee Madasha Iskaashiga Soomaaliya, kaasoo maanta oo 1-da October tahay ka furmaya magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni oo lagu casuumay shirka ayaa shuruud ku xiray ka qeyb galka shirka, isagoo dalbaday in isna la casuumo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dowladda Federaalka ay sheegtay in aanay aqoonsaneyn.
Shirkan oo ay agaasinkeeda laheyd dowladda Federaalka ayaa casuuntay Wasiirka Maaliyadda Jubbaland.
Wararka ayaa sheegaya in shirkan oo ay ka qeyb galayaan illaa 50 dowladood oo ah dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa durba uu muujinayaa khilaafka dhinacyada siyaasadda Soomaaliya gaar ahana dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Maamulada Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle oo gacan saar la leh dowladda Federaalka ayaa shirka ka qeyb galaya, sidoo kale waxaa la leeyahay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo habeen ka hor ku dhawaaqay inuu wakaaladiisa dib ugala soo noqday dowladda Federaalka ayay u badan tahay inuu ka qeyb geli doono.